EVY's Kitchen: ပြည်ကြီးငါးဆီပြန်၊ Squid Si Pyan
ကြာလှပါပြီ တစ်လောက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ် အလှုသွားတော့ ဒီဟင်းမျိုးပါတယ်။ စားကောင်းလွန်းလို့ အိမ်မှာပြန်ချက်စားပြီး ဘလော့ပေါ်တင်လိုက်တာပါ။ ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ဆိုတော့လည်း ဟင်းတွေက အမယ်စုံ အမျိုးမျိုးပေါ့။ သူငယ်ချင်းအမေက ဟင်းချက်အရမ်းကောင်းတာ ခုမှသိတယ်။ ခါတိုင်းလဲ သွားနေတာပါပဲ ဒါပေမယ့် မသိခဲ့ဘူး။ ဒီလောက်ဟင်းအမယ်များများကို အကုန်လက်ရာကောင်းအောင် ချက်နိုင်တယ် ဆိုတာ မနည်းဘူးလေ။ ဒီပြည်ကြီးငါးဟင်းကတော့ သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ချက်တာဆိုပဲ။ တော်တော်ကောင်းလို့ ပြည်ကြီးငါးတစ်မျိုးထဲကို ထပ်ကာထပ်ကာယူမိတယ်။ ဟင်းတွေများလွန်းတော့ ဟင်းခွက်အကုန်မနိုက်နိုင်ပါဘူး။ သူ့ကို ချက်နည်းမေးကြည့်တော့လည်း ရိုးရိုးဆီပြန်ပဲ အဲဒါကိုက စားလို့ကောင်းနေတာ။ ဗမာဆီပြန်ဟင်းကတော့ တော်တော်များများ ချက်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။
လုပ်နည်းလည်း အထူးတလယ်မရေးတော့ပါဘူးနော်။ ပြည်ကြီးငါးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ် သေးသေးလေးတွေလှီး။ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဆီသတ်၊ နံနံပင်ထည့်၊ ပြည်ကြီးငါးထည့် ခဏနေဆိုရပြီ။ အောက်မှာတော့ ဘလော့လာလည်တဲ့ ဗမာမဟုတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စမ်းချင်ရင်စမ်းနိုင်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားလိုက်တယ်။ ပြည်ကြီးငါးဆီပြန်မချက်ကြည့်သေးရင် ချက်ကြည့်စေချင်တယ်။ အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။
2 medium size squid (clean and cut into small pieces and season with salt and pepper)
2 onions (chopped or you can use food processor)
some coriander (chopped)
some red chili
about 10 Tbsp of vegetable oil
1 tsp of seasoning powder
some fish sauce to taste
Heat oil in work and fry onions and garlic until they become soft.
Add tomato, chopped coriander, red chili , seasoning powder, 1Tbs of chili powder and some fish sauce (adjust to your taste).
Cook for about5to7mins or until the tomatoes are fully cooked ( you should see some clear oil by then - that is called "Si Pyan")
Finally, add the seasoned squids and cook forafew minutes only. Note, don't over cook as it will make the texture of the squid rubbery instead of just soft.
Dish out and garnish with some fresh coriander. Enjoy.
Posted by Evy at 11:33 AM
Labels: Burmese Food, Cooking, seafood
Looks delicious! Squid is one of my favourite! And this spicy dish looks really good!
Thank you for stopping by my blog and for following, I am following you right back. Haveanice day!
ဗိုက်ဆာလို့ တွေ့ရာဘလော့ ကြည့်မိပါတယ် ...
Hi All, thanks for visiting :-)
Thanks for posting suchagreat recipe. I look ... I love your photos.
ထမင်းပူပူလေးနဲ့ နယ်စားရရင် တစ်ခြားဟင်းတောင် မလိုတော့ဘူး ..
ဟုတ်ပ ကြည့်တာနဲ့စားကောင်းမယ်ဆိုတာ သေချာနေတယ်း)
ပြည်ကြီးငါးက ရေဘဝဲနဲတော်တော်တူတယ်နော် အဲ့ဒါရေဘဝဲကိုပြောတာလား ..တူတူထင်တယ်နော်..သေချာမသိလို့.. ကိုရီးယားမှာတော့ ရေဘဝဲပေါက်လေးတွေကို ဝါးတူထိပ်လေးတွေမှာ ပတ်ပြီး အရှင်လိုက်ကို ဆော့နဲ့တို့စားတာဗျ တခါတလေ ရေဘဝဲလက်တွေကပါးစပ်မှာ တန်းလန်းတန်းလန်းဖြစ်နေတာ ဟီးး
Ko => ပြည်ကြီးငါးက ရေဘ၀ဲမဟုတ်ဘူးလေ။ အမျှင်တွေတော့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုယ်ထည်က ခပ်ရှည်ရှည်လေး။ ကိုရီးယားမှာ အဲလိုစားတာတော့ ကြားဖူးတယ်။ အသဲယားစရာ မတော်လည်ချောင်းမှာ ကပ်နေမှဖြင့် :D
Yin => Thanks for visiting :-)
Whatabeautiful dish! I don't mind to have oily food once inawhile :)
ွှThanks Ann for visiting :-)
ရေများရင် မာတောင့်တောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား..ပြောပြပေးပါဦးနော်...း)
ညီမအေးမြတ်သူဇာ-ဟုတ်တယ်ညီမရေ။ ခဏပဲမီးပေါ်ထားရတယ်။ အစ်မတော့ အနှစ်တွေအားလုံးကို ဆီပြန်ကာနီးတော့မှ ပြည်ကြီးငါးထည့်တယ်။ ပုဇွန်တွေဘာတွေချက်ရင်လဲဒီလိုပဲ။